မထင်မှတ်ထားဘဲ လူ့လောကကနေ စောစောစီးစီးထွက်ခွာသွားတဲ့ ကိုရေမွန် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်….. – Cele Oscar
မထင်မှတ်ထားဘဲ လူ့လောကကနေ စောစောစီးစီးထွက်ခွာသွားတဲ့ ကိုရေမွန် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်…..
June 24, 2021 By L YC Knowledge
ယနေ့ မှာ တော့ rock သီခငျြးတှေ ကို အမိုကျစား သီဆို တတျတဲ့ Idiots အဖှဲ့ဝငျ ရမှေနျ တဈယောကျ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ အရညျအခငျြးရှိပွီး ငယျရှယျသူ လေးမို့ အားလုံး က နှမွော တသ စိတျမကောငျး ဖွဈနကွေတာ လညျးတှရေ့ ပါတယျ ။ တဈခြို့က လညျး သူ ရဲ့ နာမညျကွီး ခဲ့တဲ့ သီခငျြးစာသားလေး တှကေို အမှတျတရ ရေးရငျး ဝမျးနညျး ကွောငျးတှေ ဖျောပွခဲ့ ကွတာ တှရေ့ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အနုပညာ ရှငျမြားစှာ ကလညျး စိတျမကောငျး ဖွဈမိကွောငျး ကို အမဲရောငျ ပရိုဖိုငျ မြား ခြိနျးကာ ဝမျးနညျးကွောငျး ဖျောပွခဲ့ ကွတာ တှရေ့ပါတယျ ။ လူ့လောကထဲ ကနေ ရမှေနျ တဈယောကျ ပြောကျကှယျ သှားပမေယျ့ လညျး သူရဲ့ ခံစားခကျြ အပွညျ့ နဲ့ သီဆို ခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှေ ကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ရငျထဲမှာ အခြိနျတိုငျး ရှိနမေယျ ဆိုတာ ယုံကွညျ မိတာ အမှနျပါပဲ ။
အခုလညျး အုပျစိုးခနျ့ က သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာလေး ထကျမှာ ရမှေနျ နဲ့ အတူ ဆုံတှေ့ ခဲ့တဲ့ အမှတျတရ လေးတှကေို ပွနျလညျ ဖျောပွ လာပါတယျ ။ ပုံရိပျလေး တှေ အပွငျ Show ပှဲနောကျ က သီဆို မဖြျော ဖွခေငျ အမှတျတရ ရိုကျထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး တှနေဲ့အတူ ” အကိုရေ…. မစော လှနျးဘူး လားဗြာ….ညီကိုအမွဲတမျးအရငျလို မဆုံတော့ ဘူးလားဗြာ…ညီတို့ အတူတူ အမွဲပြျောပီး စနောကျတာတှေ မရတော့ဘူး လားဗြာ အကိုရေ!!! အကို.! Rest In Peace ပါခဈြဆုံးကိုကွီးရာ …. ” ရေးသား ဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျ ဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Oak Soe Khant
ယနေ့ မှာ တော့ rock သီချင်းတွေ ကို အမိုက်စား သီဆို တတ်တဲ့ Idiots အဖွဲ့ဝင် ရေမွန် တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရည်အချင်းရှိပြီး ငယ်ရွယ်သူ လေးမို့ အားလုံး က နှမြော တသ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြတာ လည်းတွေ့ရ ပါတယ် ။ တစ်ချို့က လည်း သူ ရဲ့ နာမည်ကြီး ခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေး တွေကို အမှတ်တရ ရေးရင်း ဝမ်းနည်း ကြောင်းတွေ ဖော်ပြခဲ့ ကြတာ တွေ့ရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အနုပညာ ရှင်များစွာ ကလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်း ကို အမဲရောင် ပရိုဖိုင် များ ချိန်းကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ကြတာ တွေ့ရပါတယ် ။ လူ့လောကထဲ ကနေ ရေမွန် တစ်ယောက် ပျောက်ကွယ် သွားပေမယ့် လည်း သူရဲ့ ခံစားချက် အပြည့် နဲ့ သီဆို ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အချိန်တိုင်း ရှိနေမယ် ဆိုတာ ယုံကြည် မိတာ အမှန်ပါပဲ ။
အခုလည်း အုပ်စိုးခန့် က သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာလေး ထက်မှာ ရေမွန် နဲ့ အတူ ဆုံတွေ့ ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြ လာပါတယ် ။ ပုံရိပ်လေး တွေ အပြင် Show ပွဲနောက် က သီဆို မဖျော် ဖြေခင် အမှတ်တရ ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး တွေနဲ့အတူ ” အကိုရေ…. မစော လွန်းဘူး လားဗျာ….ညီကိုအမြဲတမ်းအရင်လို မဆုံတော့ ဘူးလားဗျာ…ညီတို့ အတူတူ အမြဲပျော်ပီး စနောက်တာတွေ မရတော့ဘူး လားဗျာ အကိုရေ!!! အကို.! Rest In
Peace ပါချစ်ဆုံးကိုကြီးရာ …. ” ရေးသား ဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပြည်သူတွေအတွက် ဒီအရေးတော်ပုံကြီး မအောင်မြင်မချင်း အိမ်ကိုဘယ်တော့မှ မပြန်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု…..
အလွမ်းသီချင်းတွေကိုသီဆိုတတ်တဲ့ ကို ရိမ်မိုး ဂီတလောကကနေ အပြီးအပိုင် နှုတ်ဆက်လိုက်ကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောလာခဲ့…..